नाम मात्रको 'फ्री भिसा, फ्री टिकट', रोकिएन ठगी, विभाग के हेरेर बसेको छ ? | Khabarpato
नाम मात्रको 'फ्री भिसा, फ्री टिकट', रोकिएन ठगी, विभाग के हेरेर बसेको छ ?
काठमाडौं, चैत ०१, २०७७
फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएको देश कतार १ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरेर जान लागेको काठमाडौँमा भेटिएका कैलालीका कविजी चौधरी बताउँछन् । सरकारका हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भए पनि तर कामदारलाई यो सुविधाले नछोएको उनले बताए ।
‘कतार जान फ्री भिसा, फ्री टिकट रे त ? भनेर एजेन्टलाई सोधेको, उसले जुन म्यानपावरले पठाउँछ, त्यहीँबाट जाऊ भनेर हप्कायो । खोइ, हाम्रो हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएन’, उनले भने, ‘कतार जान काठमाडौँसम्म आउँदा २ लाखभन्दा धेरै खर्च हुन्छ । म्यानपावरले डेढ लाख लिएको छ । अब नगएर के गर्नु, देशमा रोजगारी छैन ।’
फ्री भिसा र फ्री टिकट सरकारी कागजमा सीमित रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, कोसी इन्टरनेसनल प्रालिबाट रोजगारीका लागि यूएई जान लागेका काभ्रेका रूपनारायण श्रेष्ठले १ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिरेको बताए । देशभित्र रोजगारी नपाइने, म्यानपावरले भनेजति पैसा दिएर यूएई होटलमा काम गर्न जान लागेको उनको भनाइ छ ।
फ्री भिसा र फ्री टिकटका विषयमा कुरा गर्‍यो भने एजेन्ट र म्यानपावरले 'डिमाण्ड नै छैन' भनेर तर्किने गरेको उनको गुनासो छ ।
श्रम मन्त्रालयले लागू गरेको फ्री भिसा र फ्री टिकटका विषयमा वैदेशिक रोजगारीमा ती देश जाने श्रमिक प्राय: जानकार छन् । तर, मलेसिया र खाडीका देश जाने कामदारलाई फ्री भिसा र फ्री टिकटका बारेमा जानकारी भए पनि उनीहरू धेरै पैसा तिरेर सरकारले फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेका देश जान बाध्य छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा २०७२ सालदेखि फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेको थियो ।
कतार, मलेसिया, साउदी अरेविया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, जोर्डन, बहराइन र ओमान जाने कामदारका लागि भिसा र आतेजाते हवाई टिकटबापत लाग्ने खर्च कामदारले तिर्न नपर्ने नीति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लागू गरेको हो ।
सरकारले लागू गरेका फ्री भिसा र फ्री टिकटका विषयमा सबै कामदार जानकार भए पनि उनीहरू चर्को रकम तिरेर विदेसिने बाध्य छन् तर वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउन डरले आफूले तिरेको पैसाका बारेमा कामदार खुलाउन चाहँदैनन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग कति पैसा तिरेर जान लागेको ? भनेर विभागबाट अनुगमनमा खटिएको टोलीले सोध्दा वास्तविक जानकारी नदिने गरेको वैदेशिक रोजगार विभाग महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाल बताउँछन् ।
सरकारले फ्री भिसा र फ्री टिकटका विषयमा स्रोत देश र स्वयं म्यानवार कम्पनीसँग नै परामर्श लिइरहेको विभागका महानिर्देशक दहालले बताए ।
‘विभागले फ्री भिसा र फ्री टिकटका नाममा धेरै पैसा लिने म्यानवार र एजेन्टलाई कारबाही गर्दै आएको छ । धेरै रकम म्यानपावरलाई बुझाए पनि सरकारले तोकेको रसिद मात्र कामदारले लिन्छन्', उनले भने, ‘समस्या रोजगारीको खोजीमा जाने कामदारमा पनि छ । कामदार विदेश जानुअघि लाखौँ तिर्न पनि तयार हुन्छ । समस्यामा परेपछि मात्र यति रकम एजेन्ट र म्यानपावरलाई तिरेको भन्दै विभागमा आउने गरेका छन् ।’
ठूलो रकम ठगिएको उजुरी लिएर दैनिक रोजगार पीडित विभागमा आउने गरेको र घटनाको प्रकृति हेरेर कानुनी कारबाही अघि बढाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
४ लाख लिए पनि १० हजारको रसिद
खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारले प्रतिव्यक्ति देशैपिच्छे ८० हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेको पाइएको छ । यूएईको सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारसँग म्यानपावरले ४ लाख रुपैयाँसम्म उठाउँदै आएका छन् । यसरी उठाएको पैसामा एजेन्टले ३० प्रतिशत लिने गरेको पाइएको छ ।
यसरी म्यानपावरले पैसा उठाए पनि कामदारलाई भने १० हजार रुपैयाँको मात्र रसिद दिने गरेका छन् ।
रोजगारीको खोजीमा अथवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीसम्म आइपुग्नुअघि नै एजेन्टलाई पेस्की बुझाउने गरेको पाइएको छ । रोजगारीको खोजीमा रहेका कामदारले प्रतिव्यक्ति २० देखि ३० हजार रुपैयाँका दरले एजेन्टलाई बुझाउने गरेको पाइएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका श्रमिकले एजेन्टलाई राहदानीसमेत बुझाउने गरेका छन् । कामदारले म्यानपावर र एजेन्टसँग राहदानी फिर्ता माग्दा प्रतिराहदानी ३० हजार रुपैयाँसम्म माग्ने गरेको पीडितले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
हाल वार्षिक वैदेशिक रोजगारीका नाममा १ अर्ब रुपैयाँ ठगी हुँदै आएको विभागको तथ्यांकमा छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएको भन्दै दैनिक करिब २०० कामदार समस्या लिएर धाउने गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
विश्वकै महँगा खेलाडी रोनाल्डो, जो डाक्टरले एभोर्सन गर्न नमानेपछि जन्मिएका थिए
डाक्टरले एभोर्सन गर्न नमानेपछि जन्मिएका रोनाल्डो विश्वप्रसिद्ध फुटबल खेलाडी क्रिष्टियानो …
लोभी कांग्रेस: माओवादी-समाजवादीसँग घाँटी जोडेर सत्तामा जान हतारमा
केपी शर्मा ओलीलाई चड्कन हान्न कांग्रेससँग घाँटी जोड्न लागेको माओवादी केन्द्रले त साथ द…
फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएको देश कतार १ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरेर जान लागेको क…
दशौँ नेफ्टा अवार्ड: ६ वटा अवार्ड उचाल्यो 'छक्का पञ्जा ३'ले (अन्य सूचीसहित)
कमेडी र सोसल ड्रामाका रूपमा रहेको तथा व्यावसायिक रूपमा सफल बनेको &#39;छक्का पञ्जा ३…